Download Wepụ Ụzọ 4x4 Jeep Racing Xtreme 3D Apk Gratis Untuk Android - 9Game Indonesia
Jeep Rally Racing egwuregwu na Real SUV ụgbọala Simulator mara maka ya oke 4X4 SUV ụgbọala na-akpali akpali safari na ọhịa gburugburu ebe obibi.
4X4 4GB Xtreme Jeep na-arụ ọrụ na Nitro 4X4 Jeep Engine na atụmatụ nke ezigbo 4X4 N'elu.
4X4 Ọkwọ ụgbọala
Bụrụ ihe Oke Offroad oké iwe ọkwọ ụgbọala nke SUV na Jeep ikpochapụ niile larịị nke a dị ịtụnanya Jeep Rally stunt game 2017.
Your Racing azọ ndị na-emegide gị na i nwere na-egosi gị oké iwe ịnya ụgbọ 4X4 iti ha niile na a moto jiipu rally stunt egwuregwu nke agaghị ekwe omume jungle tracks.
Na nke a Jeep 4X4 Offroad Mania ụgbọala jungle gburugburu ebe obibi bụ otú ike na ọ bụ nanị ndị December moto jiipu Ọkwọ ụgbọala nwere ike ịlanahụ Offroad Driving Mania moto jiipu rally.
Ùnu na-arahụ nke ọma maka ụgbọala 4X4 bumpy jeep ugwu ugwu? Ọ bụrụ na azịza ya bụ ee, mgbe ahụ, download now a Offroad 4X4 Xtreme Jeep Jeep Racing 3D egwuregwu na-enwe ize ndụ bumpy 4X4 Jeep Jungle ugwu ugwu drive ịme anwansị.
4X4 Egwuregwu ụgbọala na ugwu okporo ụzọ dị egwu na-achọ nkà ịkwọ ụgbọala dị ịtụnanya na usoro ndị ọzọ. Ndị na-anya ụgbọala na-akwọ ụgbọala na-egwu egwu ga-egwu egwu 4X4 Xtreme Jeep Racing 3D ma gosipụta na ị bụ ezigbo ọkwọ ụgbọ ala. Ugwu elu ugwu 4X4 Jeep Offroad Mania Driving 2017 na-emezu nrọ gị dị ize ndụ nrọ.
Ngwongwo ihe omimi Jeep Racing 4x4 bu ugbua ihe omuma nke ugbua 4x4 (Jeep). Gaa na nlekota ala ma kpoo ike siri ike 4x4 Jeeps ime ihe egwu na-adighi nma.
Soro egwuregwu kacha mma kacha mma nke 4X4 jee na-agba ọsọ n'okporo ụzọ ndị dị n'elu ugwu site na otu ugwu ugwu ruo n'Ugwu Extreme ọzọ.
Enwe 4X4 moto jiipu na-akwọ ụgbọala 2017 Rally na oké ọhịa na ugwu na-moto jiipu akwọ ụgbọala na mmiri na apịtị na kacha mma moto jiipu engine physics na a 4x4 unyi track ọnwụnwa ọhịa ịnya ụgbọ ala na-adọba ụgbọala simulator.
Nke a Off-ụzọ 4X4 Jeep Xtreme Racing 3D egwuregwu na-enye ihe dị ịtụnanya dịgasị iche iche nke 4x4 elu Nitro engine ike ugbo ala dị ka àjà ihe ọṅụṅụ Hammer Mountain Deluxe, dara oké ọnụ SUV 4X4 Prado, Safari Forest 4X4 moto jiipu, Car Monster 4x4 onyielu nwoke, SUV iche Rover XV wdg
Ahụmahụ Na-akpali Mmasị
4X4 Xtreme Jeep Racing 3D na-enye gị ọṅụ ịkwọ ụgbọala na-akpali akpali. Ọ na-adị gị ka ị na-anya n'ụgbọ mmiri Russia, ọdụ ụgbọ oloko London na Brazil Brazil.
4X4 Xtreme Jeep Racing 3D nwere ezigbo ọchị maka ndị nke mba ụwa. Pak Asia 4X4 cargo jeep dị nnọọ mmasị n'ihi na Offroad Crazy Rides.
Mgbe ị na-akwọ ụgbọala, ị ghaghị ịgafe ebe dị iche iche nke ọhịa na ili nke 4X4 ụgbọala. Ala 4X4 Hummer Drive bụ ụzọ dị egwu nke dị elu na ala dị egwu n'ugwu ọhịa.
Ụgbọ njem na ebe ndị na-adọba ụgbọala na-enweghị ebe a ga-achọta ya ka i wee ghara ịkwụsị ọbụna ịbanye na ụgbọala ụgbọala 4X4 jee ozi. Jiri ụgbọala si na 4X4 ụgbọala na-agagharị na Offroad.
Mee ka ụdị àgwà kacha mma 4x4 Jeep ma nwee obi ụtọ na gburugburu ebe obibi, ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịkwọ ụgbọala okporo ụzọ 4X4 Jeep.
4X4 Xtreme Jeep Racing 3D agbajuru na njirimara ndị a:
- Nhọrọ nke Jeep dị iche
- Ọkwá dị elu nke ịma aka
- Mfe Control Ngwakọta
- Chọgharịa Ebe Ọdịnihu Njem Ọsọ
- Mmetụta Okpu ume
- Na-egwu egwu egwuregwu
- HUD zuru oke tinyere revs, ngwa ngwa na ọsọ.
- Ịgba, TC na nhazi ESP. I nwekwara ike gbanye ha!
- Chọpụta ebe zuru ụwa ọnụ zuru oke.
- Ezigbo ugbo ala. Kwụsị ụgbọ ala gị!
- Ezigbo uzo ogwu ugbo.
- Chekwaa ụgbọ ala gị na akụ
- Ọtụtụ ese foto dị iche iche.
- 451 people has rate it -